အမျိုးသမီးများအပေါ်4စာအုပ်တွေဖတ် - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » စာပေ အမျိုးသမီးများအပေါ် "4 ဖတ်ရန်စာစောင်များ
သောကြာနေ့မတ်လ 8 အပေါ်ကျင်းပမည့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနိုင်ငံတကာနေ့အခါသမယ, တွင်, ဒီမှာနေရာ, တိုက်ပွဲ, ဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးသမီးတွေသတ္တိမှတ်မိကြောင်းအကျင့်ကိုကျင့်၏ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
"အင်းငါချစ်သောအစ်မ" DE Chloe DELAUME
"သမ်မတနိုငျငံ၏စုန်း" ပြီးနောက်စာရေးဆရာ Chloe Delaume20 နှစ်အတွင်းအဘို့အအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲများ၏သမိုင်းစူးစမ်းသော "ကျွန်မကအရမ်းချစ်ရတဲ့ညီအစ်မ," အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲသက်တမ်းတိုးများ၏ပြဿနာနှင့်ဖခင်အုပ်စိုး၏မျိုးသုဉ်းအပေါ်တစ်ဦးအကျဉ်းနှင့်ခွဲစိတ်ဇာတ်ကြောင်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကလေးတစ်ဦးအဖြစ်သူ့မျက်စိရှေ့တော်၌မိမိအဘအားဖွငျ့သူ့အမိ၏လူသတ်မှုအဖြစ် - - မိမိပုံပြင် autobiographical data တွေကိုသတိပေးခဲ့လျှင်သူ့စာအုပ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပေါ်မှာရှိသမျှတစ်ဦးစုပေါင်းရောင်ပြန်ဟပ်မှုအထက်တွင်သည်နှင့်အနေဖြင့်ဖွစျနိုငျ ရွေ့လျားမှု #metoo ။
ငါ "၎င်း ဖြစ်. ," "ဖွစျလာသူ" လို့သူတို့က "စကားလုံး sorority သည်ဤ designates": Chloe Delaume ဗိုင်းရပ်စ်ပါဝါ tool အဖြစ်အသစ်တခုလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် sorority ၏ထွန်းပေးဆောင်ရွက်ပြီး - ခပ်သိမ်းသောမိန်းမတို့သည် addressing အားဖြင့် ငါကြှနျုပျတို့သညျ "shaped" ။ " ကျွန်တော်တို့တစျခုကျနော်တို့အမျိုးသမီးတွေ။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ကိုရိပ်မိနှင့်ကုသ "ဟုသူမကသူမ၏စာအုပ်အတွင်းကပြောပါတယ်။
"ကျွန်မကအရမ်းချစ်ရတဲ့အစ်မတွေ," Chloe Delaume, ed ။ တံခါးခုံကို။
ဂလိုရီယာ Steinem ၏ "လမ်းပေါ်မှာဘဝကို"
"ဤလောကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်အမျိုးသမီးကိုမေးမနေပါနဲ့ - မိန်းမတို့အားလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကမ္ဘာကြီးကိုမေးပါ။ " ယနေ့တွင်ဟောင်း 83 နှစ်ပေါင်း ဂလိုရီယာ Steinem အမေရိကန်အမျိုးသမီး icon ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာ, လှုပ်ရှားသူ, ဒါပေမယ့်လည်းသတင်းစာဆရာသူအမျိုးသမီးမဂ္ဂဇင်း "ဟုမစ္စတည်ထောင်ခဲ့ပြီး မဂ္ဂဇင်း "နှင့်အမျိုးသမီးများမီဒီယာစင်တာ, မီဒီယာအတွက်အမျိုးသမီးများမြင်သာတိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းက။ ထိုသို့သောလမ်းခရီးစဉ်သည်, မိမိကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ "ဟုအဆိုပါလမ်းမပေါ်တွင် My Life," စာဖတ်သူကိုအမေရိကန်တလွှားခရီးသွားလာသူမ၏ဘဝသုံးစွဲလျက်ရှိသည်နှင့်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအဘို့ထောက်ခံသူအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏လမ်းကြောင်းအပေါ်စတင်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင်။
Christiane Taubira အားဖြင့်နိဒါနျးပိုငျး, ဒီကလူသားဝါဒဇာတ်ကြောင်းကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှတဆင့်, မာတင်လူသာကင်း၏မိန့်ခွန်းကနေလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းများ၏အခွင့်အရေးများ၏ဆင့်ကဲခြင်းငှါ, ဇာတိအမေရိကန်အကြောင်းမရှိအမေရိကန်သမိုင်းနှင့်တိုက်ပွဲများငါးခုဆယ်စုနှစ် retraces နှင့် ဟီလာရီကလင်တန်နှင့်ဘရက်ခ်အိုဘားမား၏နိုင်ငံရေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။
"ဟုအဆိုပါလမ်းပေါ်ကငါ့ဘဝ," ဂလိုရီယာ Steinem, ed ။ Harper ကို Collins ။
ရာခေလသည် INGALLS ၏ "Mrs Caliban"
(အမေရိကန်နှင့် 1982 အတည်မပြုရသေးသောပွငျသစျထဲတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ) တစ်ဦးဖှယျဝတ္ထုပုဖော်ပြ "မစ္စစ် Caliban" ဟုအဆိုပါအမျိုးသမီးများအကြီးမြတ်ဆုံးအသံနှင့်နှစ်ဆယ်ရာစု၏အမျိုးသမီးစာပေ၏တဦးတည်း, ရာခေလသည် Ingalls ကလည်းကမ်းလှမ်းမှုစဉ်းစား ဒေါ်ရသီ, တစ်ဦး monotonous နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း Fred သည်နှင့်အတူနေ့စဉ် castrating အတွက်ပိတ်မိနေအမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး၏ဇာတ်လမ်း။
လာရီ, အဏ္ဏဝါလေ့လာရေးဌာနထံမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်မယ့်ဧရာမသတ္တဝါမှီတိုငျအောငျ, သူ့ဖြစ်တည်မှုအလုပ်မှာအနှောက်အယှက်။ သူမလိင်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်သူကိုနှင့်အတူသစ်အဖော်။ ဒုတိယလှိုင်းအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲအားဖြင့်မှုတ်သွင်း, ဒီဒဏ္ဍရီအထူးပဲ့ထိန်း Guillermo del Toro မိမိအရုပ်ရှင်၏ဇာတ်ညွှန်းအတွက် "ရေကို၏ပုံသဏ္ဍာန်။ "
မစ္စစ် Caliban, ရာခေလသည် Ingalls, ed ။ ပြည်ပမှာ Belfond.
"ဤအမျိုးသမီးများ-ရှိ၏" Gerard MORDILLAT OF
အဆိုပါဣတ္တစ်ဦးရန်ပွဲ။ စျေးနှုန်းခုခံဟာသ "ရယ်မောခြင်း၏တပ်မဟာ" ပြီးနောက်လျက်, စာရေးဆရာနဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ "မျှော်စင်ဖျက်သိမ်း" Gerard Mordillat နိမိတ် "သူများသည်အမျိုးသမီးများအား" (ed ။ Albin မိုက်ကယ်), တစ်ဦး choral ဝတ္ထုပုကတိကဝတ်ရိုသေရာ quickfire, ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အမျိုးသမီး၏ရဲစွမ်းသတ္တိ, ဒါပေမယ့်မရမယ့်အတွက် ပြင်သစ် ဖက်ဆစ်ပြည်နယ်၏လက်။
unionists, လေယာဉ်မယ်, ဆရာကျောင်း, အထက်တန်းကျောင်း, အဆိုတော်, ဒါရိုက်တာ, ခွဲစိတ်ဆရာဝန်, သတင်းစာဆရာ, အိမ်အကူ - ​​- အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောနောက်ခံကနေဇာတ်ကောင်ဟာ host ကနေတဆင့်စာရေးဆရာတစ်ဦး၏စိတ်နှလုံးမှစာဖတ်သူကိုကြာ အာဏာရှင်အစီအမံဆန့်ကျင်ပဲရစ်သရုပ်ပြ gouvernement နှင့်ရှုထောင့်သို့စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ချက်၏အစွမ်းသတ္တိကိုထည့်လေ့မရှိတဲ့အမြော်အမြင်နံရံဆေးရေးပန်းချီကားများဖော်ပြသည်။ အားလုံးလက်တွေ့ကျကျကဲ့သို့ချွန်ထက်နေတဲ့ဘောပင်တစ်ချောင်းအားဖြင့်ဝတ်ပြုကြ၏။
"ဒီအမြိုးသမီးမြား," ဂျရတ် Mordillat, ed ။ Albin မိုက်ကယ်။
SOURCE မှ: https://www.cnews.fr/culture/2019-03-07/4-livres-lire-sur-la-condition-feminine-819314